INONA NO ATAO RAHA TSY HITA NY TONTONANA EXCEL - EXCEL - 2019
Mamerina ny rakitra diso ao amin'ny Microsoft Excel
Ny orinasa ZyXEL dia manamboatra fitaovana maro samihafa, ao amin'ny lisitr'ireo izay misy routers ihany koa. Izy rehetra dia voafetra amin'ny tontonana tsy misy idirany, saingy amin'ity lahatsoratra ity dia tsy handinika ny fizotran'ny antsipiriany manontolo isika, fa hifantoka amin'ny asan'ny port forward.
Sokafy sokitra amin'ny router ZyXEL Keenetic
Ny software izay mampiasa fifandraisana amin'ny Internet mba hiasana amin'ny fomba mahomby indraindray dia mila manokatra sehatra sasany mba hahazoana fifandraisana avy any ivelany amin'ny fiasa tsara. Ny fanodinana dia tanterahana amin'ny alalan'ny mpampiasa azy amin'ny alàlan'ny famaritana ny port ary ny fanitsiana ny fametrahana ny rindrambaikon'ny fitaovana. Andao isika hizotra amin'ny dingana rehetra.
Dingana 1: Famaritana ny Port
Amin'ny ankapobeny, raha mikatona ny seranan-tsambo, dia hampahafantatra anao izany ny fandaharana ary hampiseho hoe iza no tokony halefa. Na izany aza, tsy izany foana no zava-misy, ka mila mahafantatra ity adiresy ity ianao. Izany dia vita tanteraka amin'ny fanampian'ny programa kely ofisialy avy amin'ny Microsoft - TCPView.
Sokafy ny pejin-tranonkalan'ilay fampiharana etsy ambony, izay ao amin'ny fizarana "Download" Tsindrio ny rohy mifanentana mba hanombohana ny download.
Andraso mandra-paha-feno ny download ary esory ny ZIP amin'ny alalàn'ny archiver mety.
Jereo koa: Archived for Windows
Ataovy ilay programa amin'ny alalan'ny dika-tànana amin'ny doka EXE.
Ny tsanganana eo ankavia dia maneho lisitry ny dingana rehetra - ity no rindrambaiko napetraka ao amin'ny ordinateranao. Mitadiava ny zavatra takiana ary diniho ny tsanganana "Port Remote".
Ny seranana hita dia hosokafana amin'ny alàlan'ny fanodikodinam-peo ao amin'ny tranonkalan'ny router, avy eo ny manaraka.
Dingana 2: Fametrahana ny router
Ity sehatra ity no tena fototra, satria mandritra izany no hanaovana ny dingana lehibe - ny fametrahana ny fitaovana ampiasain'ny tambajotra amin'ny fandikana ny adiresin'ny tambazotra. Ny tompon'ny ZyXEL Keenetic routers dia takiana hanatanteraka ireto fihetsika manaraka ireto:
Ao amin'ny bar an'ny adiresy imailaka, midira 192.168.1.1 ka mandehana;
Rehefa manitsy ny router aloha ianao, dia aleo ny mpampiasa hanova ny login sy ny tenimiafina mba hidirana. Raha tsy niova ianao dia avelao ny saha "Password" foana "User Name" mifidyAdminary tsindrio eo "Login".
Soraty amin'ny sehatra ambany ny lisitra. "Home Network"Avy eo sokafy ny tabilao voalohany "Fitaovana" ary ao amin'ny lisitra, tsindrio ny tsipika ny PC, dia foana ny voalohany.
Jereo ny boaty "Adiresy IP mahazatra"Kopia ny hasiny ary ampiharo ireo fiovana.
Ankehitriny dia mila mifindra any amin'ny sokajy ianao "Security"toerana ao amin'ny fizarana "Adiresy Network Address (NAT)" mila mandeha manampy fitsipika vaovao.
Any an-tsaha "Interface" mifidy "Fifandraisana malalaka (ISP)"mifidy "Protocol" "TCP"ary midira ny iray amin'ny seranan-tsambo efa nomanina. Amin'ny andalana "Redirect to address" Ampidiro ny adiresy IP an'ny solosainao azonao nandritra ny dingana fahefatra. Vonjeo ny fanovana.
Manorà fitsipika hafa amin'ny fanovana ny protocol "UDP", raha mbola mameno ny zavatra sisa tavela araka ny toerana teo aloha.
Izany dia manatanteraka ny asa ao amin'ny fikandrana, afaka mandinika ny seranan-tsambo sy ny fifandraisana eo amin'ny rindrambaiko ilaina.
Dingana 3: Jereo ny seranana misokatra
Mba ho azo antoka fa ny seranana voafantina dia navadika tamim-pahombiazana, ny fanampiana manokana amin'ny aterineto dia hanampy. Misy ny maro amin'izy ireo, ary ohatra ny nofinofinay 2ip.ru. Mila manao ireto manaraka ireto ianao:
Mandehana any amin'ny tranokalan'ny 2IP
Sokafy ny pejin-tranonkalan'ny serivisy amin'ny alalan'ny tranonkala iray.
Mandehana any amin'ny fitsapana "Port Check".
Any an-tsaha "Port" Ampidiro ny isa ilainao ary tsindrio avy eo "Jereo".
Aorian'ny segondra vitsivitsy hiandry, hiseho ny fampahalalana tianao hampahafantarina momba ny toeran'ny seranan-tsambo, ary ny fanamarinana dia feno.
Raha toa ianao ka miatrika ny zava-misy fa tsy mampiasa rindrambaiko azo antoka ny servisy virtoaly, dia manosika ny fanesorana ny rindrambaiko sy ny Windows Defender. Aorian'io, andramo ny fanatanterahana ny seranana misokatra.
Atsaharo ny firewall ao Windows XP, Windows 7, Windows 8
Afaho ny Antivirus
Ny bokinay dia tonga amin'ny famaranana lojika. Ambonin'izany, nampidirinao tao amin'ireo dingana lehibe telo amin'ny seranan-tsambo mandeha amin'ny serasera ZyXEL Keenetic. Manantena izahay fa vitanao ny miatrika ilay asa tsy misy olana ary ankehitriny ny rindrambaiko rehetra dia miasa tsara.
Skype programa: laharana port ho an'ny fifandraisana miditra
Ports any amin'ny uTorrent
Ampahafantaro sy ampifanitsio ny fandefasana ny port amin'ny VirtualBox